Villa Somalia oo jawaab ka bixisay cabashadii ka soo yeertay hooyo Amran Maxamed Cismaan – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Jan 18, 2020
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay cabashada hooyo Amran Maxamed Cismaan oo sheegtay in gabar ay dhashay oo 16 jir ah ay haystaan ciidamada ilaalada madaxtooyada.
Amran Maxamed Cismaan oo ah Hooyo Soomaaliyeed kuna nool magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in mudo ku siman labo bilood ay ka maqantahay gabar yar oo ay dhashay.
Hooyo Amran waxa ay sheegtay in gabadheeda dhawaan laga keenay dalka dibaddisa, isla markaana iyadoo dugsi ka dhiganeysa magaalada ay wadeen gabdho kale, kuwaas oo ay sheegtay inay u geeyeen ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya.
Amran oo ah hooyada dhashay gabadha la weysanyahay ayaa sheegtay inay lacagtaas oo gaareysay 2,000 oo dollar ay ogolaayeen in ay dhiibaan, balse markii dambe ragaasi ay u sheegeen inaysan meel ku ogeyn gabadheeda.
Axmed Madoobe oo eedeyn culus u jeediyey madaxda dowladda federaalka